Vondrompiarahamonina sivily miisa 130 miantso ny tafika hanaisotra ny fiampangàna ny olontsotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2019 16:09 GMT
ny mpisolovava U Kyi Myint (farany havia), ny mpikatroka Ko Nay Myo Zin (afovoany) ary ilay poety Saw Wai (farany havanana). Sary sy fanondroana avy amin'y The Irrawaddy
Ity lahatsoratra nosoratan'i Zaw Zaw Htwe ity dia avy amin'ny The Irrawaddy, tranonkalambaovao iray tsy miankina ao Myanmar, ary naverin'ny Global Voices navoaka ao anatin'ny fifanarahana mifampizara votoaty. Ny lahatsoratra dia miresaka momba ny fanenjehana ireo mpanakiana izay miantso fanitsiana ny lalam-panorenana. Tamin'ny 2008 ny tafika no nanao ny drafitray ny lalàm-panorenana izay misy andalana manome vàhana ny vahohony amin'ny parlemanta sy ny kabinetra, na dia any aorian'ny famerenana ny fitondràna ho an'ny sivily aza, ary na inona na inona ho vokatry ny fifidianana manaraka eo.
Misy 130 ny fiombonamben'ireo fiarahamonim-pirenena miantso ny tafika ao Myanmar mba hanaisotra ireo fanenjehana atao amin'ny mpisolovava malaza iray, poety iray ary kapiteny iray fahiny tao amin'ny tafika noho ny filazana azy ireo ho nanàla baraka ny tafika nandritra ny adihevitra iray natrehan'ny rehetra momba ny fanitsiana lalàm-panorenana.
Neken'ny fitsaràna ao amin'ny kantaon'i Kawthaung ny vesatra naroson'ny tafika tamin'ny 31 Oktobra 2019 ka nanenjehany an'ilay mpisolovava U Kyi Myin, ilay kapiteny fahiny tao amin'ny tafik'i Myanmar, Nay Myo Zin ary ilay poety Saw Wai, mpikatroka telo fantatry ny maro tsara mihitsy, noho ireo fanamarihana nataon-dry zareo tao anaty fihaonana natrehan'ny daholobe tao amin'ny kantaon'i Kawthaung, faritra Tanintharyi, tamin'ny Aprily ho fanohanana ny komity ho amin'ny fanitsiana ny Satan'ny parlemanta.
Ny 15 Novambra 2019, teo amin'ny 130 teo ireo vondrona fiarahamonim-pirenena tao Myanmar miasa aminà olana midadasika be no namoaka fanambaràna iraisana nanamelohana ny ezaky ny tafika hanenjika ireo mpikatroka tel,o no sady mitaky ny tafika mba hanaisotra avy hatrany ireo fanenjehana.
Volana enina taorian'ny nanaovan-dry zareo ilay resadresaka tao Kawthaung, nofaritan'ny tafika ho nanao fanalam-baràka ny Tatmadaw ireo telo ireo, araka ny fahafantarana ny tafik'i Myanmar sy ny fitondrana miaramila.
”Tanjon'ny fanehoankevitra nataon-dry zareo ny hitondra fisavoritahan-tsaina,’’ hoy ny kôlônely Thant Sin Oo avy amin'ny Fibaikoana Amorontsiraka tao anaty antsafa iray vao haingana niarahany tamin'ny The Irrawaddy . Nolazainy fa noho io, nanao fitarainana mivantana tany amin'ny Fitsaràna ao Kawthaung ny tafika, ary nenjehana araka ny Artikla 505 (a) ao amin'ny Sazy Famaizana ireo telo ireo.
Efa nahavita sahady herintaona an-tranomaizina noho io fiampangàna io ihany ilay kapiteny fahiny tao amin'ny tafika, Nay Myo Zin, fiampangàna nataon'ny tafika ao Yangon, noho ny nilazàny ny Lalàm-panorenana ho tsy demaokratika.
Tao anatin'ny fanambaràna nataon-dry zareo, nilaza ilay vovonan'ny fiarahamonim-pirenena fa ny fanapahankevitry ny Tatmadaw hanokatra fanenjehana ireo telo ireo dia fanitsakitsahana ny Lalàna fahafahana mifamory am-pilaminana, satria ilay famoriana izay anton-dresaka dia natao nifanaraka tamin'ny lalàna.
Araka ny lazain'ilay vovonana, ny fampiasàn'ny tafika an'ilay Artikla 505 (a) dia tsy hoe fotsiny fanitsakitsahana ny Lalàm-panorenana tamin'ny 2008, fa koa mizotra mankany amin'ny fanimbàna ny fahamendrehan'ny Tatmadaw sy ny firenena. Ny fanapahankevitry ny fitsaràna hanaiky ilay fanenjehana ataon'ny tafika, nefa tsy nandalina ilay raharaha akory ary tsy nangataka fanazavana avy amin'ireo telo nampangaina, dia fanitsakitsahana ihany koa ny zo fototry ny olompirenena, hoy ilay vondrona tao anatin'ilay fanambaràna.
Daw Naw Ohn Hla, mpikatroka iray avy amin'ny foko Karen ary filohan'ny Firaisan'ireo Vehivavy Karen, iray amin'ireo vondrona fiarahamoninmpirenena 130 tafiditra ao anatin'ilay fanambaràna, nilaza fa
Mpiasan'ny governemanta ireo miaramila. Raha manao ny tsy mety ry zareo, zon'ny olompirenena ny milaza izany. Zon'ny olompirenena ny mampiakatra ny feony.
Nolazain'i Daw Naw Ohn Hla ihany koa tamin'ny The Irrawaddy tamin'ny 15 Novambra fa tadiavin'ny tafika izay handefasana any amin'ny fonja miaramila ireo olona manakiana ny tafika, mba hanakanana azy ireny tsy hidradradradra.
Ilay mpikatroka ho an'ny tombontsoan'ny tantsaha, U Zaw Yan, mpikambana iray ao amin'ny kaomitin'ny Tambajotran'ny Asam-Bahoaka ao Yangon, nanampy fa
Tsy tohinina ny Tatmadaw. Nilaza ny Tatmadaw fa hiaro ny lalàm-panorenana saingy ry zareo ihany no manao izay mifanohitra amin'ny zon'ny olompirenena ka manenjika ny olona araka ny lalàna. Ahoana no hahafahantsika manohy amin'ny hoavy?
Nolazainy ihany koa fa ny olona tsy maintsy manana zo hampiaka-peo momba ny fijeriny ary mizara sosokevitra momba ireo drafitry ny parlemanta, izay tafika no be mpikambana ao anatiny, hanitsy ny lalàm-panorenana.
Ny 30 Oktobra 2019, mpkambana dimy avy amin'ny thangyat Daungdohmyoset (Peacock Generation), tarika mpanao seho nentindrazana, no voaheloka herintaona an-tranomazina sy hanao asa an-terivozona araka ny Artikla 505 (a) noho ny filazàna azy ho nanakiana ny tafika tao anatin'ilay seho mananihany nataon-dry zareo nandritra ny fetiben'ny rano natao tamin'ny Aprily. Ny ampitson'ilay seho dia nohelohina ireo mpilalao, neken'ny fitsaràna ny fangatahan'ny Tatmadaw hanenjehana an'i U Kyi Myin, Nay Myo Zin sy Saw Wai.
Voaheloka araka io artikla io ihany koa, saingy any aminà kantao hafa ao amin'ny faritr'i Yangon sy Ayeyarwady, ireo mpilalao ireo. Henjehan'ny tafika araka ny Artikla 66 (d) momba ny fifandraisadavitra ihany koa ry zareo fa hoe nizara lahatsoratra tao amin'ny Facebook heverina ho toy ny fanalàna baràka ny tafika.
Moanina iray avy ao amin'ny faritra Mandalay ihany koa no voaheloka tamin'ny Oktobra noho ireo fanamarihana nataony tao anaty antsafa iray izay lazaina fa nanala baràka ny taifka, araka ny Artikla 500.
Vao haingana no nilaza tamin'ny The Irrawaddy i Maung Saung Kha, talen'ny Athan, ilay vondrona mpisolovava amin'ny resaka fahalalahana maneho heivtra, fa ankehitriny dia misy 30 ireo tranga anenjehan'ny Tatmadaw sivily 77. Nampiany fa, nanomboka tamin'ny Aprily, nitombo ny isan'ireo ezaka ataon'ny tafika mba hanenjehana mpikatroka, indrindra fa ireo izay manohana ny fanitsiana ny Sata.
Ny 4 Novambra, namoaka fanambaràna ihany koa ny Tambajotran'ireo fiarahamonimpirenena sivily ao Yangon nitakiany ny tafika hanaisotra ireo rehetra fanenjehana sivily no sady nitakiany tamin'ny governemanta mba hamotsotra ireo nalefa any am-ponja noho ny vesatra mifandraika amin'ireo raharaha napetraky ny Tatmadaw. Lazain'ilay fanambaràna fa ny fananganana fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny governemanta, tafiditra amin'izany ny Tatmadaw, no laharam-pahamehana raha miasa mikatsaka fandriampahalemana sy fampihavana i Myanmar. Araka ny tambajotran'ireo fiarahamonimpirenena sivily ao Yangon, vao mainka hanasarotra ny fahazoan'ny Tatmadaw ny fitokisan'ny vahoaka ireny fanenjehana sivily ireny.
Nanatona ny tafika ny The Irrawaddy mba hahazo izay fanehoankeviny, saingy tsy namaly ny antsony ilay mpitondratenin'ny tafika, ny brigadie jeneraly Zaw Min Tun, hatramin'ny 15 Novambra.